सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, कति प्रतिशत बढ्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, कति प्रतिशत बढ्यो ?
जेठ ३० गते, २०७६ - १६:५२
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १२ प्रतिशत बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यायायात व्यवसायी, उपभोक्ताकर्मी र सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँग छलफल गरी भाडादर बढाएको हो ।
विभागका अनुसार उक्त भाडामा थप १२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । योसँगै अब सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने यात्रुले ४ किलोमिटर सम्मको १६ रुपैयाँ भाडा तिर्नु पर्ने भएको छ। यसअघि १४ रुपैयाँ थियो ।
जेठ ३० गते, २०७६ - १६:५२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा चीन र गणतन्त्र कोरियाका राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा...
देशभरका १३ विमानस्थल मात्रै नाफामा, यी हन् बेफाइदामा भएका विमानस्थलहरू
काठमाडौं । हवाई सेवाको विकास विस्तारका लागि मुख्य पूर्वाधारका रुपमा रहेको विमानस्थलमा अर्बौं लगानी...